Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » ndị mmadụ » Agwaetiti Laucala nabatara Onye isi Nchịkwa ọhụụ
Na-agbasa News Travel • Akụkọ Fiji • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Resorts • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Laucala Island, agwaetiti mara mma nke dị na agwaetiti Fijian Pacific, kwupụtara nhọpụta nke Onye Isi Nchịkwa ọhụrụ.
Laucala Island, agwaetiti mara mma nke dị na agwaetiti Fijian Pacific, kwupụtara nhọpụta nke Onye Isi Nchịkwa ọhụrụ nke Laucala Island.
Peter Nilsson bụ onye nlekọta a na-ahụ maka ile ọbịa na Sweden nke nwere afọ 25 na-ahụ maka ọrụ onye ndu na họtel na okomoko dị na Asia, Indian Ocean, ọdịda anyanwụ na ọwụwa anyanwụ Europe na ụgbọ mmiri na-aga n'oké osimiri.
Ọ sonyere na Laucala Island site na ụlọ ọrụ ụlọ nkwari akụ Ritz-Carlton na Malaysia ma nwee ọkwá General Manager, Group General Manager na Onye isi nchịkwa na-eduga n'agbụ ndị ọbịa dị ka akara ngosi Soneva nke isii Sens Group, Hilton Worldwide n'okpuru Conrad ika, Centara Hotels & Resorts flagship Resort na Hua Hin, Thailand na Anantara Hotels na Resorts.
Nilsson na-akọwa onwe ya dị ka 'agwaetiti aficionado' ma biri ma rụọ ọrụ na yana gburugburu ụfọdụ n'ime osimiri mara mma kachasị mma na ebe ntụrụndụ ụwa. N'oge oge ya Peter na-enwe ọ travelingụ ịgagharị na-achọpụta ọdịbendị ọhụrụ, foto, ịba mmiri, usoro ọmụmụ mmiri na ịmị ụgbọ mmiri.